दाङमा व्यावसायिक किम्बु खेती गर्न थालिएको छ । देउखुरीमा रेसम धागो उत्पादनका लागि ४५ विगहामा किम्बुको व्यावसायिक खेती गरिएको हो । २०७३ सालदेखि सुरु भएको किम्बु खेती तीन वर्षमा ४५ विगहामा पु¥याइएको छ ।
नेपाली कपडा बनाउनका लागि रेसम धागो उत्पादन गर्न सकिने भएपछि देउखुरीका बासिन्दा किम्बु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । २०७३ सालमा धादिङबाट देउखुरी गढवा गाउँपालिका वडा नं. ३ हडैयाँमा आइपुगेका महेशदत्त अधिकारीले १० विगहा जमिनबाट सुरु गरेको किम्बुखेती पछिल्लो समय अन्यले पनि विस्तार गरेका छन् । १० विगहा जमिनबाट सुरु भएको व्यवसाय अहिले पश्चिम नेपालकै ठूलो व्यवसाय भएको अधिकारीले बताए ।
कम मेहनतमा किम्बुवाट धेरै उत्पादन लिन सकिने भएपछि अहिले देउखुरीका धेरै स्थानीय किम्बुको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । जसका कारण पछिल्लो तीन वर्षमा ३५ विगाह जमिनमा किम्बुको व्यावसायिक खेती विस्तार भइसकेको स्वर्गद्वारी रेशमखेती विकास तथा अनुसन्धान प्रशोधन स्रोत केन्द्रका सञ्चालक महेशदत्त अधिकारीले बताए । ‘किम्बुको व्यावसायिक खेती गर्न सके राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “पछिल्लो समय देउखुरीका धेरै किसानले व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ ।” उनका अनुसार गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकाका धेरै स्थानमा अहिले व्यवसाय सुरुवात भएको
छ । १ लाख ५० हजार किम्बुका विरुवा रोपेर व्यवसाय सुरुवात गरेका उनले हाल १६ लाख विरुवा पु¥याएका छन् । हालसम्म करिव ५० लाख रूपैयाँ लगानी गरेको उनले बताए ।
अधिकारीले यस वर्षमात्र १२ लाख नयाँ विरुवा उत्पादन गरेका छन । दाङमा एक सय विगहा बढी जमिनमा किम्बु खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका अधिकारीले किम्बुको व्यवसायमा ३० जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । उनले आफूले उत्पादन गरेको ८० प्रतिशत रेसम धागो जापान, अमेरिकालगायतका देशसम्म व्यापारीमार्फत पठाउने गरेको बताए । बाँकी धागो आफैंले कपडा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । किम्बुलाई व्यावसायिकरूपमा अघि बढाउन सके रोजगारीका लागि कोही पनि विदेशिन नपर्ने अधिकारी बताउँछन् । “किम्बु बहुउपयोगी फल हो, यसलाई राम्रोसँग खेती गर्न सकियो भने धागो उत्पादनसँगै बाख्रापालन, कुखुरापालन व्यवसायसमेत गर्न सकिन्छ,” उनले भने । जसले गर्दा किसानले एउटै व्यवसायबाट धेरै फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
व्यक्तिको सानो लगानीबाट सुरु भएको व्यवसायमा पछिल्लो समय स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समेत सहयोग गर्न थालेको छ । रेसम धागो उत्पादनका लागि सुरु भएको किम्बुको व्यावसायिक प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश नं. ५ सरकारसँगै गढवा गाउँपालिकाले समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको व्यवसायी अधिकारी बताउँछन् । व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि राज्यको सहयोग पाएपछि स्थानीयसमेत किम्बुको व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ । सय विगाहभन्दा बढीमा किम्बु खेती गर्न सके दाङमा कपडा उत्पादनका लागि उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको अधिकारीले बताए ।